तिब्र गतिमा सवारी चलाउँदै हुनुहुन्छ ? सचेत हुनुहोस्, साउन १ बाट एक हजार जरिवाना तिर्नुपर्ला ? – Mission Khabar
तिब्र गतिमा सवारी चलाउँदै हुनुहुन्छ ? सचेत हुनुहोस्, साउन १ बाट एक हजार जरिवाना तिर्नुपर्ला ?
मिसन खबर २९ असार २०७५, शुक्रबार ०३:५०
काठमाडौं – तिब्र गतिका कारण सवारी दुर्घटना बढेको निष्कर्ष सहित ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना बढाएको छ । परिमार्जित नियम अनुसार अब सवारी साधान तीब्र गतिमा कुदाउनेले साउन १ गतेदेखि दोब्बर जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।
विगतको ५ सय जरिबाना बढाएर १ हजार पुर्याउनेगरि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यातायात व्यवस्था विभागबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ । विभागले १३ वैशाखमा तीब्र गतिमा सवारी चलाएवापत ५ सय रुपैयाँदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिन सकिने व्यवस्थासहितको पत्र ट्राफिकलाई पठाएको थियो । जरिवाना बढाएपछि तिब्र गतिमा कमि आउने र दुर्घटनाको दर केही कम गर्न सकिने ट्राफिक प्रहरीको विश्वास छ । यसपछि सबै सवारी चालकको मानसिकता परिवर्तन गर्ने अभियानमा ट्राफिक लाग्ने बताइएको छ ।
आवश्यक कागजपत्र नभएका, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने र लेन अनुशासन पालना नगर्ने बिरुद्ध ट्राफिकले ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिदै आएको छ । यस्तै, मादक पदार्थ सेवन गरी चलाउनेले ५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल्न पाउने कानुनी ब्यवस्था छ । मापसेमा भने ट्राफिकले संलग्नताको पटकका आधारमा जरिवाना लिदै आएको छ ।